Loko - kofehy manjaitra, kofehy peta-kofehy
MH dia mikendry ny hanome mpanjifa manana loko kofehy manerantany. Avy amin'ny trano famakiam-boky miloko misy alokaloka maherin'ny 10,000, ny karatra Mh miloko dia manome safidy alokaloka 400, ary koa ny Mh dia manome valiny haingana ho an'ny famokarana loko ny lokon'ny loko, mifanaraka amin'ny filanao manjaitra.
Mba hanampiana ny hamantatra ny fahasamihafana amin'ny loko, dia nanamboatra rafi-pandrefesana ny lokony. Manondro ny lokon'ny loko tsirairay avy amin'ny lokon'ny habaka, dia afaka mampiasa ny isa marina isika mba handrefesana ny fahasamihafana eo amin'ny loko. Misy karazana loko maromaro misy.
Tombontsoa amin'ny famerana ny loko
Ankoatra ny famerenana ny loko amin'ny zavatra iray amin'ny marimaritra iraisana amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny loko, dia manampy ihany koa ny fikojakojana ny lokony, hanamora ny fifandraisana amin'ny loko sy ny loko. Ny famatsiana maneran-tany amin'ny tsenan'ny tsiranoka dia mila ahafahana mifandray mivantana amin'ireo endrika sy fenitra loko manerana izao tontolo izao. Amin'ny fandrefesana loko, dia azo omena torimaso amin'ny toerana sahaza araka ny tokony ho izy ireo tahiry ireo.